Twitch တွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနည်း - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 30/04/2022 14:00 | အားလပ်ချိန်
Twitch ပလပ်ဖောင်းသည် သင့်အတွက် ရင်းနှီးနေသည်မှာ သေချာပါသည်၊ သို့သော် တစ်ချိန်တည်းတွင် twitch stream အများအပြားကို သင်မည်သို့ကြည့်ရမည်ကို သင်မသိနိုင်သေးပါ။. ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အကြီးဆုံးပလပ်ဖောင်းများထဲမှ တစ်ခုနှင့် ဗီဒီယိုဂိမ်းကမ္ဘာ၏ ချစ်သူအရေအတွက် အများဆုံးစုစည်းရာနေရာဖြစ်သည့် ဤထုတ်ဝေမှုတွင် သင့်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
virtual ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍသည် အချိန်နှင့်အမျှ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာကာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ကြီးထွားလာခဲ့သည်။. ၎င်းတို့သည် ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်လိုသော အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများဖြစ်ပြီး streaming platform များမှတဆင့် ပြုလုပ်ကြသည်။ ယုံမှားသံသယမရှိဘဲ ကျန်အရာများထက် ထင်ရှားသည့်အရာမှာ ကမ္ဘာကျော် Twitch ဖြစ်သည်။
ကျော်ကြားသူများ၊ သြဇာရှိသူများ၊ ဂိမ်းကစားသူများ၊ ဂျာနယ်လစ်များ၊ စားဖိုမှူးများ စသည်တို့သည် Twitch အသိုင်းအဝိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၎င်းအား အသုံးပြုကြသည်။ အကြောင်းအရာမျိုးစုံတွင် အကြောင်းအရာအသစ်များကိုပြသရန် မတူညီသောအသုံးပြုသူများနှင့် ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်း။
1 Twitch ကဘာလဲ?
2 Twitch တွင် အကြိမ်ရေများစွာကို ကြည့်ရှုနည်း
2.4 Squad တိုက်ရိုက်
ဒီပလက်ဖောင်းမှာ ဘာပါ၀င်တယ်ဆိုတာ မသိသေးတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် Twitch ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ရှင်းပြခြင်းဖြင့် စတင်ပါမယ်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ Twitch သည် အချို့သောအကြောင်းအရာများကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူထုက ဘယ်နေရာမှာမဆို မြင်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ယနေ့တွင်၊ ၎င်းကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံး streaming ပလပ်ဖောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အမှန်ပင် ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်သည်။
၎င်း၏အစတွင်၊ ပလပ်ဖောင်းသည် ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အတုအယောင်အကြောင်းအရာများကို ပြသရာတွင် အထူးပြုထားသော်လည်း၊ လောလောဆယ်တွင် ၎င်း၏ ချန်နယ်အမျိုးမျိုးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည့် ကွဲပြားသည့်အကြောင်းအရာများရှိပါသည်။. ဟင်းချက်ခြင်း၊ မိတ်ကပ်၊ တေးဂီတစသည်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်မှုများကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
FIFA ဂိမ်းကို ကြည့်ရုံတင်မကဘူး။ အကြောင်းအရာဖန်တီးသူနှင့် သင် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော နောက်လိုက် ချန်နယ်များတွင် ရရှိနိုင်သော ချတ်တစ်ခုကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကွန်ပျူတာ၊ မိုက်ခရိုဖုန်း၊ ကင်မရာနဲ့ အင်တာနက်ရှိဖို့ မလုံလောက်ဘူး၊ ချန်နယ်တစ်ခုဖွင့်ပြီး အသုံးပြုသူ အများအပြားရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့၏ စဉ်ဆက်မပြတ် အလုပ်ကြောင့် လစာများ ရရှိရန် စီမံကြသည်။ virtual platform ပေါ်တွင်။
ကြည့်ရှုသူအနေဖြင့်၊ Twitch သည် သင့်အား အချို့သောချန်နယ်တစ်ခုအတွက် ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုပေးရန် ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပေးပါသည်။ ဤစာရင်းသွင်းမှုများသည် အချို့သောအကျိုးခံစားခွင့်များကို ပေးဆောင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့် streamer နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း။
Twitch တွင် အကြိမ်ရေများစွာကို ကြည့်ရှုနည်း
ဤတိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာပလပ်ဖောင်းတွင် အဘယ်အရာပါဝင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့် Twitch တွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထုတ်လွှင့်မှုများစွာကို သင်ခံစားနိုင်ပုံကို ရှင်းပြပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သိကြသည့်အတိုင်း တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထုတ်လွှင့်မှုများစွာကို ကြည့်ရှုရန်၊ သင့်ဘရောက်ဆာတွင် တက်ဘ်တစ်ခုသာ လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ခုထက်ပို၍ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသည့်အခါတွင် မတူညီသောအသံများကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အရာမှာ အသံတစ်ခုတည်းကိုသာ အသက်သွင်းထားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
သင့်အား ကြည့်ရှုသူတစ်ဦးအနေဖြင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ချန်နယ်များစွာကို ကြည့်ရှုနိုင်စေမည့် သီးခြားနည်းလမ်းဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် မတူညီသောဝဘ်ဆိုက်များနှင့် တူးလ်များရှိပါသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့ကို သင်သိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို သင်အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် သင့်အား စာရင်းတစ်ခု ထားခဲ့ပါ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ MultiTwitch.tv အကြောင်းပြောပါမယ်။ virtual content platform ၏ မတူညီသော တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများကို ဖွင့်ရန် အကောင်းဆုံးကိရိယာများထဲမှတစ်ခု. ဤပလပ်ဖောင်းတွင်၊ သင်တစ်ပြိုင်နက်ကြည့်ရှုလိုသည့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရန် ၎င်းသည် သင့်ထံတွင် မူတည်မည်ဖြစ်သည်။
စာမျက်နှာကိုဖွင့်ပြီးသည်နှင့် အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် မက်ဆေ့ချ်တစ်ခု ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ ၎င်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်၊ သင်သည် multitwitch.tv လိပ်စာကို ချန်နယ်၏အမည်ဖြင့် နောက်တွင်ထားရန် လိုအပ်သည်။ ဘာကိုမြင်ချင်လဲ။ ဥပမာ၊ multitwitch.tv/ibai
ဤဝဘ်ဆိုက်၏ အပြုသဘောဆောင်သည့်အချက်မှာ သင့်အား အများဆုံးအရွယ်အစားကို ပေးဆောင်ရန် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုပုံစံကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်တစ်ခုစီတွင် ရှုထောင့်အချိုးကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သင်မြင်လိုသော ချန်နယ်များရှိသည့်အတိုင်း စာမျက်နှာများစွာကို ဖွင့်နိုင်သော်လည်း တက်ဘ်များ များများဖွင့်လေ၊ သင်၏ချိတ်ဆက်မှု ပိုဆိုးလာလေနှင့် သင့်ကွန်ပြူတာ နှေးကွေးသွားလေဖြစ်ကြောင်း အမြဲသတိထားပါ။
ဤကိစ္စတွင်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ခဲ့သည့်ပထမကိစ္စတွင်ကဲ့သို့ပင်သင်အလွန်လွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်သောအခြားဝဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ ဝဘ်ကို စတင်သောအခါတွင် သင်မြင်လိုသော ထုတ်လွှင့်မှုများ၏ လင့်ခ်ကို ထည့်ရမည့် အကွက်တစ်ခု ပေါ်လာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ။
ချန်နယ်များထည့်သကဲ့သို့၊ စာမျက်နှာသည် သင့်အား တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် မတူညီသောဖွဲ့စည်းပုံမူကွဲသုံးခုကို ပြသထားသည်။. ဖန်သားပြင်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် သင်ရွေးချယ်ထားသော ထုတ်လွှင့်မှုများကို မည်သို့ကြည့်ရှုမည်ကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည့် display ဆက်တင်များအတွက် မီနူးတစ်ခုကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။
Multistream.am၊ သင်အလိုရှိသလောက် stream အများအပြားကိုဖွင့်ခွင့်ပြုသည်။စာမျက်နှာကို ပိုတင်နေပါက ပြန်ဖွင့်သည့် ဖန်သားပြင်များကို ဖွင့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်၊ သုံးမျိုး သို့မဟုတ် လေးခုကြားတွင် ရွေးချယ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းနှင့် ဝင်းဒိုးပေါင်းစုံတွင် အမျိုးမျိုးသော ထုတ်လွှင့်မှုများကို ကြည့်ရှုနိုင်သည့် အခြားစာမျက်နှာများအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေပါသည်။ စခရင်၏ ညာဘက်ခြမ်းရှိ စာမျက်နှာကို ဝင်ရောက်သည့်အခါတွင် သင်တွေ့ရပါမည်။ သင်မြင်လိုသော မတူညီသောချန်နယ်များ၏ လင့်ခ်များကို ကူးယူရမည့် မီနူး။
၎င်းတို့ကို ဝင်ရောက်သည့်အခါ၊ ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုစီ၏ ညာဘက်ခြမ်းတွင် ခလုတ်သုံးခု ပေါ်လာသည်။ မတူညီသောရွေးချယ်စရာသုံးခု၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုပြသရန် သို့မဟုတ် ဝှက်ထားရန်၊ ချတ်မပါဘဲ ဖျက်ပါ သို့မဟုတ် ချတ်ဖြင့်ဖျက်ပါ။. အသံသီးသန့်ရွေးချယ်မှုများ၊ ချတ်ကိုပြသခြင်းနှင့် ထိုစခရင်ကို အခြားနေရာသို့ ရွှေ့နိုင်ခြင်းတို့အပြင်။
သင်ကြည့်ရှုလိုသော ချန်နယ်များစာရင်းအောက်တွင် ဆွေးနွေးပွဲအမည်ပါ ကဏ္ဍတစ်ခု ပေါ်လာပါမည်။ ဤပုဒ်မတွင် ခွင့်ပြုထားသည်။ သင်ဖတ်ရှုပြီး ပါဝင်လိုသော ချန်နယ်၏ ချတ်ကို ရွေးချယ်ပါ။စမ်းချောင်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခုကြားတွင် သင်အလိုရှိသည့်အတိုင်း ၎င်းကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
စတုတ္ထ၊ ကျန်နှင့်အတန်ငယ်ကွာခြားသည့် ဤကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့သင့်ကိုယူဆောင်လာပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Squad Stream အကြောင်းပြောသည်၊ မတူညီသော အကြောင်းအရာဖန်တီးသူ လေးဦးအထိ တူညီသော တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန် ခွင့်ပြုသည်။ နှင့် retransmission ကို တူညီသောရောင်းချမှုမှပြုလုပ်သည်။
ဤရွေးချယ်မှုသည် ဝင်းဒိုးပေါင်းစုံတွင် ကြည့်ရှုရန်နှင့် ဖွင့်ရန် မည်သည့်ချန်နယ်များကို သင်ဆုံးဖြတ်သည့် ယခင်အရာများနှင့် မတူပါ။ဒါပေမယ့် ဖန်တီးသူတွေကိုယ်တိုင်က သူတို့ရဲ့အလုပ်ကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ ချဉ်းကပ်ပြီး သူတို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကို ကြီးထွားလာအောင် တွန်းအားပေးတဲ့ ဖန်တီးသူတွေပါပဲ။
အဖွဲ့လိုက်စီးကြောင်းတစ်ခုစတင်ရန်အတွက် သင့်အား ရှာဖွေရပါမည်။ ထိန်းချုပ်အကန့်မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုမန်နေဂျာ ဖြတ်လမ်းများ ရွေးချယ်မှု. နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ တင်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ကို ဖိတ်ခေါ်ပါ။ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် သင်သည် ချန်နယ်တစ်ခုထည့်ရန်နှင့် အမည်ကိုရေးရန် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်ချန်နယ်အမည်ကို ကော်ပီကူးရန် ရွေးချယ်မှုကို နှိပ်ရပါမည်။
အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် သင်ဖိတ်ကြားနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်း3ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ group stream ခလုတ်ကို စတင်ပြီး ခံစားလိုက်ပါ။
ဤထုတ်ဝေမှု၏အစတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ရွေးချယ်ခွင့်၊ သင့်ဘရောက်ဆာ၏ တက်ဘ်များတွင် မတူညီသော ထုတ်လွှင့်မှုများကို ဖွင့်ရန်၊ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မအကြံပြုထားသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖန်သားပြင်တစ်ခုတည်းမှ ထုတ်လွှင့်မှုများစွာကို ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ပို၍အဆင်ပြေပါသည်။ တက်ဘ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ခုန်ရန်။
ဤအကြံပြုချက်များသည် သင့်အား virtual content စားသုံးရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ သင်သိပြီးသားဖြစ်သည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Twitch တွင် ထုတ်လွှင့်မှုများစွာကို တစ်ပြိုင်နက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဝဘ်ဆိုက်အသစ်အကြောင်း သင်သိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် မှတ်ချက်ရေးပေးနိုင်မည့် ဘောက်စ်တစ်ခုရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » အားလပ်ချိန် » Twitch တွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနည်း
ကြည့်ရှုရန် အကောင်းဆုံး Disney Plus စီးရီး